Car mgbazinye San Francisco USA | San Francisco Car mgbazinye - Carrentalchoice
Chọọ obere ala mgbazinye na San Francisco
Ụgbọ ala mgbazinye na San Francisco na ọnụego a na-apụghị ikweta ekwenye. Akwụkwọ San Francisco ụgbọ ala na-akwụ ụgwọ dị ka £ 16 kwa ụbọchị * wee gaa hụ ebe ụfọdụ kacha mma San Francisco California ga-enye.
Ugbo ala na-esi na obere ụgbọala emefu ego gaa na 7 oche na ndị na-elekọta 9 na-ebuga ụgbọala na-agba ụgwọ. N'agbanyeghị ihe bụ isi ị ga-eji mee njem iji gaa San Francisco jide n'aka na ịchọta ụgbọala iji kwụnye gị.
Na-eduzi San Francisco
N'ịbụ nke dị na Northern California, San Francisco bụ otu n'ime obodo ndị a ma ama na America. N'ịbụ nke dị nso na ọtụtụ obodo ukwu, ọ bụ ebe a na-ewu ewu ebe ị ga-esi malite ụgbọ oloko Atlantic Coast Highway. Ọtụtụ ndị ọbịa na-ahọrọ ịgbazite ụgbọ ala na San Francisco ma jiri ya dịka isi nke iji gaa ọtụtụ ebe ndị ọzọ.
Mgbe ị na-agbazite ụgbọ ala na San Francisco ọ dị mfe ileta obodo dịka Los Angeles, Hollywood, Malibu, San Diego, Seattle, Vancouver, Oakland na Las Vegas. Ụgbọ ala mgbazinye San Francisco bụ nhọrọ kachasị mma ịhụ obodo zuru ezu ma gaa ebe niile a ma ama. Car Rental Choice, ndị ọkachamara na San Francisco ụgbọ ala mgbazinye ngwa ngwa na n'enweghị ike online.
San Francisco bụ ebe ụfọdụ n'ime ama ama ama ama ama America; The Golden Gate Bridge, Alcatraz na ụgbọ ịnyịnya. A pụrụ ịchọpụta ọtụtụ n'ime ebe ndị mara mma site n'ịgba ụgbọ ala na ịgbaso ihe ịrịba ama maka "49 Scenic Drive". Ụzọ nke a na-eme atụmatụ site Mayor nke San Francisco iji nyere ndị ọbịa aka ịhụ San Francisco kacha mma. E nwere ọtụtụ ohere iji ụgbọala na-akwụsị ma gaa na ebe ngosi ihe mgbe ochie na ebe nkiri.
Akụkọ ihe mere eme nke San Francisco jupụtara n'akụkọ ihe mere eme nke California, site na Gold Rush ruo na Immigrashọn na Arts. A na-ese ọtụtụ fim ndị a ma ama dị ka Bullit na The Rock na San Francisco, ọ pụkwara ịhụ omenala bara ọgaranya n'ụzọ dị mfe. Chinatown kasị ukwuu n'ụwa na inweta ubi vaịn na-emeri bụ nke kwesịrị nleta.
Ebe 10 kachasị elu iji gaa nleta na mgbazinye ụgbọ ala San Francisco
Na-agafe n'Ọnụ Ụzọ Ámá Golden Gate
Tinye ụgbọ ala
Gaa na Nkume
Lee Oké Osimiri
Ahịa na Union Square
Nyocha North Beach
Na-eje ije site na Chinatown kachasị ochie
Nri na Ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụwa
Ọgbụgba ndụ na asọmpi San Francisco
Gịnị mere akwụkwọ Car mgbazinye na San Francisco?
Lee ihe ole mere ị ga eji eji ụgbọ ala na San Francisco
Dị ọnụ ala karịa ịzụ tiketi njem maka ezinụlọ dum.
Ụzọ dị ukwuu ị ga-esi lee anya ma hụ nlele
Ụzọ dị mfe iji gaa na osimiri
San Francisco bụ obodo buru ibu na ị nwere ike ịkwọ ụgbọala na ọmarịcha ọmarịcha Golden Gate Bridge
Ebee ka m nwere ike ịnweta ụgbọ ala m ji akwụ ụgwọ?
Anyị nwere ọtụtụ ebe na San Francisco ebe ọrụ ụgbọ ala dị, gụnyere Valencia Street, O'Farrell Street, San Francisco Airport, Ụlọ Nzukọ Center na ndị ọzọ dị iche iche.
Ọnọdụ San Francisco
Ụgbọ mmiri San Francisco (SFO)
San Francisco - okporo ụzọ O'Farrell
San Francisco - Ụlọ Nzukọ Center
Ụgbọ njem San Francisco Car Rental
Maka ụgbọ ala na San Francisco ọ ga-adị mkpa iji oge 21 chọrọ, ị nwere ikikere ịnya ụgbọ ala na kaadị akwụmụgwọ dị ugbu a. Tụkwasị na nke a, ị ga-emepụta paspọtụ gị ma ọ bụ ID cardcard mgbe ị na-anakọta ụgbọ ala gị n'akụkụ ego ịzụ ụgbọ ala gị. Ị ga-enweta akwụkwọ ịkwụ ụgwọ gị mgbe ị na-edebanye ụgbọ ala na San Francisco online.
"Ụgbọ njem ụgbọala San Francisco dị ka £ 16 / $ 13 kwa ụbọchị! * Chọọnụ n'ịntanetị ịchọta ezigbo ụgbọala ụgbọ ala gị "
Carrentalchoice ọ bụghị nanị na ụgbọ ala ụgbọala dị ala na San Francisco ma na USA dum. Gụkwuo banyere ụgwọ ọrụ ụgbọ ala dị ala ma chọpụta ihe mere anyị ji enye nnukwu ọnụego.
Ogwe AT & T
Gaa ma gaa n'ụlọ nke ụwa a ma ama San Francisco Giants baseball team. Ọ bụ ezie na tiketi ndị siri ike ịbịa (naanị 500 ka a ga-eme ka ọha na eze mara ya site na lotiri), ị nwere ike ịga njem nleta na ámá egwuregwu ahụ ma gbasaa n'azụ ebe. Njem ahụ na-ewega gị na igbe ọkpọ, ọfụga, suites, ụlọ na-agbanwe agbanwe na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ndị okenye $ 10, ụmụaka $ 6. Mepee kwa ụbọchị ma e wezụga maka oge egwuregwu.
Ị ga-abịa na 20 nkeji tupu ụgbọ mmiri ọ bụla na-esi n'ọdụ ụgbọ mmiri Fisherman pụọ gaa njem nleta nke Alcatraz Island a ma ama - ebe obibi nke ụlọ mkpọrọ mbụ a ma ama. A na-ahụ agwaetiti a site na Fisharman's Wharf ka ị na-abanye n'ụgbọ mmiri gaa n'àgwàetiti ahụ ebe ụlọ nche kachasị nchebe meghere ibo ụzọ maka oge mbụ na 1934. Gburugburu site na nkume na-arị elu, oké mmiri ozuzo na mmiri oyi na-ekpo ọkụ, a na-ewere ụlọ mkpọrọ ahụ dị ka ụzọ zuru ezu-ịgba akaebe. Otu n'ime ndị mkpọrọ a ma ama nọ na-akpọ Al Capone, Robert Stroud (onye Birdman nke Alcatraz), Machine Gun Kelly na Alvin Karpis. E mechibidoro ụlọ mkpọrọ ahụ na 1963 mgbe a gbasịrị mbọ mgbapụ dị ukwuu site na njedebe ya, ọ bụ ezie na a hụghị ahụ ọ bụla. Na 1969, ụmụ amaala America weghachitere agwaetiti ahụ maka ndị India, ruo mgbe gọọmenti mere ihe na 1971 wee wepụ ha. Oge njem nke abụọ na ọkara na-adọrọ mmasị na-eme ka ị banye n'àgwàetiti ahụ (bụ ebe obibi ugbu a n'ọhịa dịgasị iche iche) na ụlọ mkpọrọ n'onwe ya, nke gụnyere mgbanaka ntanetị na okwu sitere n'aka ndị nduzi aka.
www.nps.gov/alcatraz, (ụgbọ mmiri na-ahapụ Pier 33, Wharf Fisherman) Tel: 001 415 981 7625
Ndị okenye $ 24.50, ụmụaka $ 15.50.
Ụgbọ ala Ca Francisco nke San Francisco
Kedu nleta na San Francisco nwere ike zuru oke n'ebughị ụzọ banye n'ụgbọala ya a ma ama, nke na-agbada na ugwu ugwu dị elu? E mere ka ụgbọala ndị ahụ na San Francisco dị na 1873 gaa na ihe ijuanya nke ọha na eze, bụ ndị na-eleda anya otú ụgbọ ala (onye ọ bụla na-atụ ụta isii) na-enweghị ihe mgbochi (ha na-eji ọkụ eletrik). Ụgbọ ala ọ bụla na-ejide 100 ndị mmadụ, na ndị nduzi na aka ịkwụsị ihe ọ bụla nwere ike ijide, ọ bụ ezie na a dọrọ aka ná ntị: A ga-adọba aka ruo awa abụọ iji banye n'ụgbọ oge n'oge okpomọkụ.
N'ihi ọtụtụ ugwu na ihe ndị dị na ya, e nwere ọtụtụ ebe iji nweta echiche dị ịrịba ama banyere obodo a magburu onwe ya. Otú ọ dị, ọ dịghị ihe na-atụle na echiche ndị dị na Coit Tower na Top nke Telegraph Hill nso North Beach. Ụlọ elu nkume a dị elu na-enye panoramas ndị a na-apụghị imeri emeri nke obodo ahụ n'onwe ya na nke San Francisco Bay maka ọnọdụ ọnọdụ zuru okè.
Telegraph Hill, Tel: 001 415 362 0808. Mbanye efu.
Ụlọ ahịa na-ere ákwà na Ferry
Ọ dịghị mkpa ka ị bụrụ onye na-eri ihe na-amasị gị ka ị gaa nleta ebe a na-ere ahịa dị ka ị na-esi ísì ísì na-atọ ụtọ ihe dị mkpa nke nri San Franciscan. Na-agagharị site na ụlọ nchịkọta ụgbọ okporo ígwè na-emepụta dị ka ọka ọma dị mma, mmanya, nri, azụ, chocolate na ọtụtụ ndị ọzọ. Ụlọ ahịa ahụ na-enyekwa ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ahịa kọfị, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị pụrụ iche na ụlọ ahịa, na ọtụtụ n'ime ha na-enye echiche mara mma banyere San Francisco Bay. Nke a bụ naanị otu 'ga-eme' nke ọ bụla nleta na San Francisco.
San Francisco bụ ebe obibi nke kachasị ese foto na ọmarịcha mmiri a ma ama na ụwa dum. E mepere ebe ngosi nke San Francisco na 1937, nke gụnyere 1.7 kilomita n'ogologo, na-anọdụ ala 746 n'elu mmiri. Na-eche ụgbọ ala gị ma na-agafe ụkwụ na ụkwụ iji ghọta nke ọma ihe ọrụ nrịba ama dị egwu, ma ọ bụ nke na-atụ egwu na Golden Gate bụ n'ezie.
www.goldengatebridge.org $ 5 ma ọ bụrụ na ị na-agafe n'ụgbọala.
San Francisco bụ onye a ma ama maka nnukwu okporo ámá ya, ebe dị elu, na-agbada, na Lombard Street bụ onye a ma ama. N'ịbụ onye a maara dịka "n'okporo ámá kasị gbagọrọ agbagọ na ụwa," ọtụtụ puku ndị nleta na-eju anya otú ọ dị elu na ụzọ ụgbọ mmiri na-adọrọ adọrọ ga-ewe iji gbadaa ma gbadaa. Ụzọ zig-zags n'okporo ámá brick gburugburu ụlọ na-eme ka ọ bụrụ ihe dị egwu, ma nwee nnukwu ohere foto!
Dịrị n'etiti Hyde Street na Leavenworth Street
Ọtụtụ na-eche na Exploratorium ga-abụ ihe ngosi nka kachasị mma sayensị na mbara ala. Ndị okenye na ụmụaka ga-asọpụrụ ọtụtụ ihe omume dị ịtụnanya na ihe ngosi iji chọpụta nke gụnyere ihe niile site na nnukwu afụ na-egbu, "Mad Scientist's Penny Arcade" na ụlọ nnyocha na ihe ndị ọzọ. N'ebe a ị na - enwe ike 'imetụ oké ifufe' aka, mee ka eletriki dị ndụ ma ọ bụ soro na-eduzi nduzi mmekọrịta na-adọrọ mmasị n'ozizi Einstein nke njikọta. A ga-eji oge eji eme njem na Exploratorium dị iche iche n'egosipụta ihe ngosi dị iche iche, ya mere jide n'aka na ị ga-ahapụ ụtụtụ ma ọ bụ n'ehihie iji nweta ihe kachasị na nleta.
Ndị okenye $ 13, ụmụaka $ 8.
Edere ụdị aha a nke otu aha na Paris ka ọ bụrụ ihe ncheta nye ndị California bụ ndị nyere ndụ ha n'oge Agha Ụwa Mbụ. Ncheta a na-emegharị emegharị na-anọdụ n'otu nnukwu ahịhịa n'akụkụ n'akụkụ ugwu ndị na-enye echiche dị egwu banyere Golden Gate Bridge na obodo ndịda San Francisco. N'ime, ị ga-achọta ụlọ ngosi ihe ngosi mara mma nke nwere nchịkọta nke eserese, nkà na ihe oyiyi nke etinyere afọ 4000 nakwa otu n'ime nchịkọta kachasị elu n'ụwa nke ihe osise Rodin.
Ndị okenye $ 10, ụmụaka $ 6.
Ihe ngosi nka nke Young
Di Young bụ ụlọ ochie ochie nke San Francisco, na-ebu ụzọ malite na 1895 ma gosipụta otu n'ime nnukwu nchịkọta nke eserese ndị America na mba dum, na-esite na oge ndị colonel ruo n'oge a. Nakwa ihe osise si America, ị ga-ahụkwa nkà, nkà na textiles sitere na ụwa nile, na-egosi ọtụtụ ihe ngosi site na ngosipụta ngosipụta nke ala. Ihe ngosi nka onwe ya kwesiri ileta nani ihe owuwu a, nke nwere mputa di okirikiri nke ihe dika 950,000 pound nke chara azu nke ozo, ya na ulo elu nke 144 nke gunyere ebe a na-ekpuchi anya nke di na San Francisco Bay na obodo n'onwe ya.
Ntuzi Ụgwọ San Francisco
Naanị ụgbọ elu abụọ na-asọga San Francisco si United Kingdom, nke pụtara na ọ bụghị ọtụtụ ịsọ mpi mgbe a bịara n'ịnye ọnụahịa. Nke a apụtaghị na ụgbọ elu na-alọghachi ga-eri gị aka na ụkwụ - dị anya na ya. N'oge edere akwụkwọ, British Airways na-enye ndị mmadụ ego site na £ 170 site na ụtụ isi.
Dị ka obodo ukwu US, e nwere ebe obibi na aka iji gboo mkpa niile, ihe ụtọ na mmefu ego. Maka otu abalị na ụlọ nkwari akụ kpakpando atọ dịka St. Regis ma ọ bụ Ritz Carlton, na-atụ anya ịkwụ ụgwọ ihe dị ka £ 280 kwa ụlọ, kwa abalị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị zụọ ahịa gị nwere ike ịchọta ezigbo ego, dịka Campton Place nke ise, bụ onye na-enye ụlọ dị mma maka £ 120 n'abalị. San Francisco na-ejikwa ọtụtụ ụlọ ịgba chaa chaa, nke a na-akwụ ụgwọ ha niile na £ 80 kwa abalị.
Ịnya ụwa ndị a ma ama na ụgbọala ga-efu $ 5 kwa tiketi.
Enwere ike ịchọta nri na ihe ọṅụṅụ dị ukwuu n'ụdị nri a. Ụlọ ahịa na-ere ihe n'ọdụ ụgbọ mmiri bụ ihe atụ nke nhọrọ iri nri dị na obodo ahụ, ọtụtụ gọọmet na ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị mma na aka iji mepụta ahụmahụ nlekọta ahụmahụ dị oke ala dị ka $ 15 kwa onye maka isi nri.
Njem San Francisco
Ịga na San Francisco
San Francisco na-arụ ọrụ site na ọdụ ụgbọelu atọ zuru ụwa ọnụ, ọ bụ ezie na isi San Francisco International Airport (www.flysfo.com) n'onwe ya na-enye ụzọ kpọmkwem na United Kingdom.
British Airways (www.ba.com) - na London Heathrow.
Virgin Atlantic (www.virgin-atlantic.com) - na / site na London Heathrow.
Ịga Downtown San Francisco Site na ọdụ ụgbọ elu
Ọtụtụ ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-enyefe ụgbọ ala na-enyefe aka. Ndị a bụ ndị a:
Ọnụ Ụzọ Ọdịdị Golden Gate
Ị nwere ike ịgafe obodo San Francisco site n'ịgba ọrụ ụgbọ mmiri BART Rapid Rail (www.bart.gov) site n'ọdụ ụgbọ elu nke ọdụ ụgbọ elu dị na ebe a na-aga / ụlọ ezumike nke International Terminal site na ịbanye n'ógbè G. Enwekwara AirTrain n'ime ụlọ. na ọdụ ụgbọelu, nke ga-akpọga gị n'ọdụ ụgbọ oloko ụgbọ elu ị ga-ahụ onwe gị na ntinye dị iche mgbe ị bịarutere. Tiketi efu site na $ 1.40 maka otu nwoke tozuru etozu, nke nwere ihe dika ugbo anọ na-aga elekere hour na-aga / n'obodo.
N'aka nke ọzọ, i nwere ike iji Caltrain (www.caltrain.com) site na ijikọta na Ọdụm Milbrae site na BART Rapid Rail si ọdụ ụgbọ elu.
Ụgbọ mmiri International San Francisco dị gburugburu 13 kilomita n'ebe ndịda nke obodo. A na-eji ụgbọ okporo ígwè arụ ọrụ site n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè dị mma site na okporo ụzọ 101 na 380. A na - ahụ ụgbọ ala n'ebe a na - akpọ Car Car nke a na - akpọ ya, bụ nke a na - edebanye aka n'ime ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ site n'ahịrị na - acha anụnụ anụnụ n'elu AirTrain.
Nanị 5km n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke San Francisco n'elu Golden Gate Bridge bụ obodo mara mma nke Sausalito. Naanị ndị 8000 bi n'obere ụlọ a, ma ndị ọbịa na mpaghara San Francisco na-agakarị ya iji rie ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ahịa na obere ụlọ ahịa. Okporo ụzọ bụ okporo ụzọ n'okporo ámá nke na-agafe na Sausalito ma na-agbada na mmiri ahụ, na-enye echiche dị egwu nke San Francisco na mpaghara mmiri. Isi na Caledonia Street, ebe ị ga-achọta ọtụtụ ụlọ ahịa dị iche iche, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ ahịa, tupu ị na-agagharị n'akụkụ ọnụ mmiri maka ebe ị ga-anọ jụụ na nkwụsịtụ nke obodo San Fran.
Angel Island na Tiburon
Angel Island dị kilomita asatọ n'ebe ugwu nke San Francisco ma bụ otu n'ime California Park State na ọ bụ obodo atọ nke San Francisco Bay (ndị ọzọ bụ Yerba Buena na Alcatraz). Dịka Alcatraz, Angel Island nọ n'ụlọ mkpọrọ buru ibu ma nweekwa ebe obibi ndị ọzọ maka ndị si mba ọzọ nakwa dị ka saịtị maka nnukwu ụlọ agha. N'ụbọchị ndị a, ndị mmadụ na-aga Angel Island iji mee ka mmiri na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-aga njem njem ma ọ bụ na-eme onwe ha ka ha na-agba ịnyịnya ígwè.
Tiburon dị nso na Angel Island na nnukwu ala mmiri. Obodo nta a dị oké ọnụ ahịa nwere ugwu mara mma nke mara mma, nweekwa ọmarịcha ugbo, nke ọtụtụ yachts nwere. Obodo ahụ jupụtara n'ụlọ ahịa ihe ncheta, boutiques, ụlọ ahịa ihe ochie ma nwee obere veranda ụfọdụ. Ọ bụrụ na ị na-ebufe okporo ụzọ dị warara ka ị banye n'ugwu, ị ga-enweta echiche na-enweghị atụ banyere mbara igwe dị ịrịba ama nke San Francisco na agwaetiti ndị dị n'àgwàetiti.
Ọ bụ ezie na Oakland bụ naanị 10 kilomita n'ebe ọwụwa anyanwụ nke San Francisco, ọ na-adịghị atụnyere nwanne ya nwaanyị obodo ọfụma mmiri ọ bụla. Oakland na-akwanyere otu ọdụ ụgbọ mmiri kachasị dị nso na ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke United States, ma na-agbanye ụgbọ okporo ígwè nnukwu ụgbọ okporo ígwè ma bụrụ ezigbo obodo. Ọ bụ ezie na ọpụpụ a nwere ike ịdị na-emegide ihe na-amasị ndị njem nleta, Oakland nwere ọtụtụ ihe ọ ga-atọ ụtọ. Gaa ma gbazite ụgbọ mmiri ma gaa gburugburu Lake Merritt mara mma ruo awa ole na ole, ma ọ bụ jiri ụkwụ na-aga ije n'akụkụ mmiri ahụ dị egwu tupu ị banye na Oakland Museum, nke na-akọwa mkpa nke obodo a na-ama jijiji.
Ọ bụ ezie na ọ bụ njem 45 nke dị n'ebe ndịda San Francisco, San José bara uru kwa nkeji. Obodo a na - ehi ụra n'otu oge - nke a ma ama maka ịzụ anụ ụlọ ya na ọrụ ugbo - bụ obodo kasị ukwuu nke California California. Site na ọganihu nke Silicon Valley, ọrụ ugbo esiwo n'obodo ukwu nke na-enwe ọhụụ mara mma, ọnọdụ ụgbọ okporo ígwè, ọtụtụ iri nri na ọtụtụ ụlọ ahịa na ụlọ ahịa dị mma. San José na-enwekwa ihu igwe na-egbuke egbuke ma na-edekọ akụkọ ọnụ bụ otu n'ime obodo ndị kasị dịrị nchebe America.
Car na nso San Francisco
Njikọ ndị bara uru: 9 njem Van mgbazinye San Francisco, 7 & 9 Seater Car Rental na San Francisco Airport
5 dabere na 10 votes
Carrentalchoice.com - Car mgbazinye San Francisco,
Car mgbazinye San Francisco Review